N-GUN JA WA: တော်လှန်ရေးကောင်စီဘာကြောင့် နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သလဲ – အပိုင်း (၁)
၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ မဲဆန္ဒနယ် ၂၅၀ ရှိသည့်အနက် သန့်ရှင်း ဖဆပလက ၂၀၃ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး တည်မြဲ ဖဆပလက ၃၉ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ပမညတ သည် ရေးမြို့တစ်နေရာသာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် သန့်ရှင်းဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်သည် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့၌ ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံကျင်းပပြီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနုက “ဒီမိုကရေစီဘ၀ထူထောင်ရေးဟာ ကျနော်တို့အတွက် အဓိက အရေးဆိုတာ ထင်ရှားစေချင်တဲ့အတွက် ဖဆပလအဖွဲ့ဟောင်းကို ဖျက်ပြီး ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့သစ်ကို ကျနော်တို့ ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သန့်ရှင်း ဖဆပလအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ (ပထစ) ဟူ၍ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို ကျင်းပ၍ ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ရေးဆွဲတင်သွင်းသော ဖက်ဒရယ်မူကိစ္စကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မဆွေးနွေးဘဲ အမျိုးသားညီလာခံ၌ ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ ၆နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းအသံလွှင့်ရုံးခန်းမဆောင်၌ ပြည်ထောင်စု မူဆွေးနွေးပွဲကြီးကို စတင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံတော်အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာဦးဘဦး (သမ္မတဟောင်း) ဦးသိမ်းမောင်၊ ဦးစံညွန့်နှင့် ဦးချစ်သောင်း၊ ပထစမှ သခင်တင်၊ ဒေါက်တာ ဦးဧမောင်၊ ဗိုလ်တင်မောင်ကြီး၊ ဦးစောလူးလူ၊ ဦးဘမောင်နှင့် ဦးချစ်ဖေ၊ တည်မြဲဖဆပလမှ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ မန်းမြစိန်၊သခင်သာခင်၊ဗိုလ်ခင်မောင်ကလေး၊ဦးရှိန်ထန်း ပမညတ မှ ၀ိဓူရသခင်ချစ်မောင်၊ ဗိုလ်မြသွေး၊ ဗိုလ်အောင်နိုင်၊ ဦးထွန်းအောင်ကျော်၊ ဦးကျော်ငြိမ်းနှင့် ဦးအောင်မြင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့သလို၊ ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း မိမိတို့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံများကို ၀တ်ဆင်၍ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
“လူကြီးမင်းများခင်ဗျား၊ ဒီကနေ့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ စုဝေးကြတာဟာ ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေးအဖွဲ့က တင်ပြတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူကို ဆွေးနွေးကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမူနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောပြဖို့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောပြဖို့ အချိန်မရောက်သေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်သဘောထားကို ဒီကနေ့ ကျွန်တော်ထုတ်ဖော်မပြောသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်ပြောပါ့မယ်။
လူကြီးမင်းများခင်ဗျား၊ ဆွေးနွေးပွဲကို ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုစီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော့်အစည်းအဝေးအဖွင့်မိန့်ခွန်းကို ပြောပြီးတဲ့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ စ၀်ခွန်ချိုက ဖက်ဒရယ်မူကို တင်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီ ဖက်ဒရယ်မူကို (၁) ဒူးဝါးဇော်လွန်း၊ ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်၊ (၂) ကပ္ပတိန် မန်းတုံးနုံး၊ ချင်းအထူးဝိသေသတိုင်းကိုယ်စား လှယ်၊ (၃) ဦးထွန်းမြင့် (တောင်ကြီး)၊ ရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်၊ (၄) ဦးစိန်၊ ကယားပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တို့က ထောက်ခံကြပါလိမ့်မယ်။
လူကြီးမင်းများခင်ဗျား၊ မတ်လ ၁ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ၆နာရီ ဒီနေရာမှာပဲ အစည်းအဝေးကို ပြန်စတဲ့အခါ (၁) ပမညတ၊ (၂) ဖဆပလ၊ (၃) ရပလဖ (၄) ပထစအဖွဲ့တွေို့ ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီက အခု ဖော်ပြထားတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း ဖက်ဒရယ်မူနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထားရှိတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားများကို တင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့များရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ပြောကြားပြီးတဲ့နောက် အစိုးရအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်စား အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓ္ဓမ ဒေါက်တာဘဦးက အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားကို တင်ပြပါလိမ့်မယ်။
လူကြီးမင်းများခင်ဗျား၊ ဒီကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ ပြောလို့ပြီးတဲ့အခါ (၁) ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေးအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်ခြောက်ဦး၊ (၂) ပမညတ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး။ (၃) ဖဆပလ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး၊ (၄) ရပလဖ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး၊ (၅) ပထစကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးနဲ့ (၆) အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ဝင် လူကြီးများပါဝင်တဲ့ ကော်မတီတစ်ခုကို ဖွဲ့ပေးပါတယ်။ ဒီကော်မတီမှာ ကျွန်တော်က နာယကလုပ်ပါမယ်။ လူကြီးမင်းများခင်ဗျား၊ အဲဒီကော်မတီက ဖက်ဒရယ်မူနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးစရာ ရှိတဲ့အချက်တွေကို ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါ ရရှိတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ အစီရင်ခံပါလိမ့်မယ်။ စေ့စပ်လို့ မရနိုင်တဲ့ သဘောကွဲလွဲချက်များရှိရင်လည်း ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပဲ အစီရင်ခံပါမယ်။
ဒီနေ့ကစပြီး ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆွေးနွေးမယ့် ပြဿနာဟာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုကြီးတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကြီးကို ပြည်ထောင်စုကြီးစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ တတွေရဲ့ လက်ထက်မှာမှ ကျေကျေလည်လည် ဖြေရှင်းသွားအောင် ကျွန်တော်တို့ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင် နောက်လက်ထက်တွေမှာတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တစ်ထစ်ချ ယူဆထားသလို လူကြီးမင်းများလည်း ယူဆထားပြီးပြီဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီပြည်ထောင်စုကြီးသာ ပြိုကွဲသွားမယ်ဆိုရင် ပြည်နယ်သားတွေအတွက်ရော၊ ပြည်မသားတွေအတွက်ရော၊ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အမြတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ အရှုံးသာထွက်မယ်လို့ ကျွန်တော်တထစ်ချ ယူဆထားသလို လူကြီးမင်းများလည်း ယူဆထားပြီးပြီဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ ပြည်ထောင်စုကြီးကို စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ ကျွန်တော် တို့ အပေါ်မှာ ကျရောက်နေတဲ့ တာဝန်ကြီးတွေကို အမြဲတမ်း မျက်ခြည်မပြတ်ဖို့ ကျွန်တော်သတိထားလိုပါတယ်” ဟု သတိပေးစကား ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဆွေးနွေးမည့်ပုံစံနှင့် ပတ်သက်၍လည်း- ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ အကြမ်းအားဖြင့် နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။ တမျိုးကတော့ ရန်သူအချင်းချင်း ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီး၊ တခြားတမျိုးကတော့ မိသားစုချင်း ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစု ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ ရန်သူအချင်းချင်း စားပွဲခုံမှာ ထိုင်ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမျိုးနဲ့ မတူပါဘူး…. မိသားစုအချင်းချင်း ဆွေးနွေးကြတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမျိုးက…. ဒီမိသားစုထဲမှာပါကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတတွေဟာ ကိုယ်လိုတာတွေ ကိုယ်တင်ပြကြတယ်။ အဲဒီလိုတင်ပြတဲ့အခါမှာ သဘောကွဲလွဲချက်တွေ ရှိနေရင်၊ တယောက်နဲ့တယောက် အပေးအယူလုပ်ပြီး သဘောကွဲလွဲချက်တွေကို ညှိနှိုင်းကြတယ်။ အခုဆွေးနွေးပွဲဟာ မိသားစုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ရမယ်။ ပြည်ထောင်စုမိသားစုထဲမှာ ပါနေကြတဲ့ လူကြီးမင်းတို့ ကျွန်တော်တို့ အသီးသီးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို အကုန်လုံးထုတ်ပြီး တင်ပြကြတာပေါ့။ အဲဒီလိုတင်ပြတဲ့အခါမှာ သဘောကွဲလွဲချက်တွေကတော့ ရှိရမှာပေါ့။ အဲဒီသဘောကွဲလွဲချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကျိုး၊ ကျွန်တော်တို့ နောင်လာနောက်သားကလေးတွေရဲ့အကျိုး၊ ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အကျိုးကို မျှော်ကိုးပြီး သဘောတူညီချက်မရရအောင် ညှိနှိုင်းကြရမှာပဲ။
လူကြီးမင်းများနဲ့ လက်တွဲပြီး ပြည်ထောင်စုတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ လွတ်လပ်ရေးတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ ဒီမိုကရေစီတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး တွေကို အမှန်တကယ် အကျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ နည်းကောင်းလမ်းကောင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ရှာချင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကောင်းလမ်းကောင်းတွေကို ရှာတဲ့အခါမှာ ပြည်မသားတွေရော၊ ပြည်နယ်သားတွေပါ မျက်ခြည်မပြတ်သင့်တဲ့ အချက်ကြီးတစ်ချက်ကို ကျွန်တော်ပြလိုပါတယ်။ ဒီအချက်ကတော့ တခြားဟာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ တရားမျှတရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ ညီမျှရေးဆိုတဲ့ လောကပါလတရားသုံးပါးနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် အောက်ပါစကားဖြင့် ဦးနုသည် ၄င်း၏မိန့်ခွန်းကို နိဂုံးချုပ်လိုက်သည်- အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ မိုက်မဲမှုကြောင့် အင်မတန်အရုပ်ဆိုးလှတဲ့ ကျွန်ဘ၀ကို ပြန်ရောက်မသွားရလေအောင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကိုယ်စွမ်းရှိသရွေ့ ဥာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ ကြိုးစားကြပါစို့”
၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုက မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးသောအခါ ၀န်ကြီးစ၀်ခွန်ချိုက ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်မူတင်သွင်းသည့် မိန့်ခွန်းကို ပြောကြားခဲ့သည်။ စ၀်ခွန်ချိုက ဖက်ဒရယ်မူတင်သွင်းရာတွင် လက်ရှိပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ၁၉၄၇ တွင် ပင်လုံညီလာခံမှစ၍ ဇာတ်ကြောင်းပြန်ကာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ (၁) တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရှိခြင်း၊ (၂) တောင်တန်းဒေသများတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိခြင်း၊ (၃) လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုက ခွဲထွက်လိုက ခွဲထွက်နိုင်ခြင်း ဆိုသည့် အချက်သုံးချက်အပေါ် အဓိက ထား၍ ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်ရေးကို ပင်လုံညီလာခံ၍ သဘော တူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် တောင်တန်းဒေသစုံစမ်းရေးအဖွဲ့က စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်စဉ်ကလည်း အထက်ပါ အချက်သုံးချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်ရန် ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၄၇ မေလတါင် ကျင်းပသော ဖဆပလ ပဏာမပြင်ဆင်မှုညီလာခံတွင်လည်း လူမျိုးစုများ တန်းတူရရှိရေးမူနှင့် ထိုတန်းတူရေးအပေါ် အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်တည်ဆောက် ရေးလမ်းစဉ်ကို ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်တွင် အခြေခံဥပဒေကိစ္စစဉ်းစားကြစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောကြားခဲ့သည့် လမ်းညွှန်ချက် ခုနစ်ချက်ကို အကျဉ်းချုပ်၍ ၀န်ကြီးစ၀်ခွန်ချိုက ပဏာမ ပြောကြားခဲ့သည်-
ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးခေတ် ၁၄ နှစ်ခရီး၊ ပြည်မက နောင်တော်တွေနဲ့ လက်တွေ့လျှောက်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ေ တွ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေဟာ အပြည့်အ၀မရှိမှန်း သိလာခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အစွမ်းကုန် ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သိသာခံစားနေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်များအပေါ် ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်တော့ဘဲ ပြည်မလို့ခေါ်တဲ့ ဗမာပြည်ဒေသတွေကို အဓိက ကိုယ်စားပြုလာတာ တွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ ပြည်နယ်များကတော့ ပြည်မနဲ့ ညီမျှမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက် စွမ်းအားရှိသလောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်မရှိခဲ့လို့ တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုရင် ပြည်ထောင်စုရယ်လို့ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းကြတဲ့အခါ ပြည်နယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့လူမျိုးစုများကို ပြည်နယ်အင်္ဂါနဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းပြီး ရှမ်းပြည်နယ်လူထုအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်လူထုအတွက် ကယားပြည်နယ်ရှိကြသလို ပြည်မလူထုအတွက်လည်း ပြည်နယ်တနယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ တန်းတူညီတူအခြေခံအပေါ် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိလို့ပဲလို့ ဆိုတာ သက်သေပြနေပါတယ်။ ပင်လုံညီလာခံရဲ့ အနှစ်သာရ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို အဓိကထားပြီး တန်းတူညီတူဖွဲ့စည်းစုပေါင်းရန် အကောင်အထည်ဖော်လာကြရင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရဟာ ပြည်နယ်များအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစိုးရပဲ ဖြစ်ရမှာပါပဲ။
(မိုးမခမှ ကိုသန်းဝင်းလှိုင် ဆောင်းပါးများကို ပြန်လှည်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)